2018.6.12-6.14 चीन-मेक्सिको व्यापार मेला - चीन Ningbo डी आर धातु Indutries
Ningbo डी आर धातु उद्योग कं, लिमिटेड 2018 चीन-मेक्सिको व्यापार मेला धाउन रहेको छ।
मिति : 12 औं -14th, जुन
ठेगाना: Av। स्यान्टाफी न 270. Colonia स्यान्टाफी। Delegacion Alvaro Obregon, सीपी 01210 मेक्सिको, DF
समय : 10: 00-18: 00
बुथ न : N107 N207
फेयर मा, तपाईं हाम्रो ओटो भागहरु र पंप फिटिंग देख्नेछन्। मुख्य रूप पिस्टन छड, आघात अवशोषक Eyelets, रबर भागहरु र भेला dampers सहित ओटो भागहरु।
अघिल्लो दिन, श्री लग Pillau, Miorante को सीओओ, मेक्सिको को दूतावास सामान्य गर्न संघाई नयाँ consular स्वागत रूपमा सेवा गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो। श्री मिलानो सीओओ Binu संघाई मेक्सिको को नयाँ कौंसुल सामान्य गर्न मेक्सिकोमा एमआई Orante को प्रदर्शनी विस्तृत।
संघाई मेक्सिको को कौंसुल सामान्य यो चीन (मेक्सिको) व्यापार मेक्सिकोमा आयोजित निष्पक्ष ठूलो महत्त्व संलग्न भनेर व्यक्त गरे। को कौंसुल सामान्य विश्वव्यापी समूह प्रदर्शनियों आयोजना मा एमआई Orante अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी को बल affirmed, र उहाँले ध्यान र पूरै चीन (मेक्सिको) व्यापार मेला समर्थन जारी हुनेछ भनेर व्यक्त गरे।
यस वर्ष, चीन (मेक्सिको) व्यापार मेला को 2017 प्रदर्शनी को आधार मा प्रदर्शनी को मात्रा विस्तार हुनेछ। त्यहाँ 2017. यो वर्ष मा 760 exhibitors थियो, यो exhibitors संख्या गत वर्ष भन्दा 1.5 पटक पुग्न हुनेछ अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईं भेट्न अगाडी देख।